Wararkii Ugu dambeeyay ee Caalamka iyo Warabadka SBC International – SBC
Wararkii Ugu dambeeyay ee Caalamka iyo Warabadka SBC International
Posted by editor on Julaay 23, 2011 Comments
Dowladda Belgium oo noqotay dowladii labaad ee Indhashareerka ka mamnuucda dalkeeda
Brussels:-Waxaa maanta ka hergalaya dalka Belgium-ka ku dhaqanka xeer lagu mamnuucayo xirashada waxa loo yaqaan Niqaabka ama indhashareerka, taasi oo ka dhigaysa in dowladda Belgium-ka ay noqoto dalkii labaad ee qaada talaabo lagu mamnuucayo indhashareerka kadib dowladda faransiiska.
Xeerkan ayaa dhigaya in aan lagu qaadan Karin niqaabka goobaha sida aadka ah ay ugu badan yihiin bulshada.
Sidoo kale xeerkan ayaa ku cad in gabadhii qaadata indhashareer ay bixin doonto ganaax dhan 125 Ganni, hadii mar kalana lagu arkana ay muteesan doonto xabsi toddobo maalin ah.
Xildhibaanada barlamanka Belgium-ka ayaa ansixiyey xeerkan muranka badan uu kadhashay labo bilood ka hor sababo amaan awgood.
Haweenay lagu magacaabo Iniis Wootaris oo ah qareen ayaa aaminsan in xeerkan uu ka hor imanayo xoriyadda hadalka iyo sinaanta ragga iyo dumarka.
Dhanka kale u qeybsanaha midowga yurub arrimaha xuquuqda aadanaha ninka lagu magcaabo Tomas Hamarbaraag ayaa ku tilmaamay in xeerka mamnuucidda qaadashada indhashareerka uu kordhinayo hoos u dhaca qiimaha dumarka halkii uu ka xoreyn lahaa.
Dowladda France ayey ahayd dowladdii ugu horeysay ee Yurub ah oo hergelisa xeer lagu mamnuucayo qaadashada indhashareerka bishii April ee la soo dhaafay, kadib markii uu ansixiyey golaha dustuurka dalka faransiiska bishii October 2010.
Khilaafka u dhexeeya golaha milatariga Masar iyo qaar kamid ah axsaabta siyaasadeed oo cirka isku shareeray
Cairo:- Afhayeenka dhaqdhaqaaqa 6 April ee dalka Masar ninka lagu magcaabo Maxed Caadil ayaa beeniyey in xubin kamid ah dhaqdhaqaaqooda ay ka qeyb gashay banaan bax kadhacay xarunta golaha milatariga oo looga soo horjeeday golaha milatariga ee haya talada dalka Masar sida warbaahinta Masar ay ku warantay.
Golaha milatariga ayaa ku eedeeyey xarakada lagu magacaabo 6 April in ay dadaal ugu jirto iska horkeenida shacabka iyo ciidanka.
Golaha oo soo saaray bayaan tirsigiisu yahay 69 ayaa sheegay in talaabooyinkii wax ku ool ka ahaa ee maalamahan ka qabsoomay dalka Masar loola jeeday hergelinta dalabaadka kacaankii 25 Janaayo balse ay jiraan kooxo wata masaalix gaar ah, kuwaasi oo doonaya in ay fitno ka dhex abuuraan shacabka iyo ciidanka qalabka sida ee dalka Masar.
Bayaan ay soo saartay xarakada 6 April ayaa waxa lagu cambaareeyey golaha milatariga, waxaana lagu sheegay bayaanka in goluhu uu doonayo in xarakada uu ka hor keeno shacabka xilli xarakada iyo shacabka ay ka sugayaan golaha milatariga xaqiijinta dalabaadka kacaankii 25 Janaayo.
Dhanka kale Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa goobjooge in ciidanka booliska magaalada Al-askandariya ay rasaas kor u rideen islamarkaana ay garaaceen dibadbaxyaal xiray mid kamid ah wadooyinka magaalada taasi oo keentay in 10 qof oo dibadbaxayaasha ah ay ku dhaawacmaan.
Iran oo sheegtay in aysan doonayn in shidaalka ay ka goyso India
Tehran:- Mas’uul katirsan wasaaradda naaftada dalka Iran ayaa sheegay in dalkiisu uusan qorsheenayn in uu ka joojiyo naftada uu u dhoofiyo dalka India, sababo la xiriira bixinta lacagaha lagu leeyahay New Delhi, kadib markii Iran ka digtay in ay shidaalka ka jari doonto haddii aanan la xalin mushkilada taagan.
Madaxa xafiiska arrimaha caalamiga ee shirkadda shidaalka qaranka Iran ayaa sheegay in wasiirka naftada ninka lagu magacaabo Maxed Cali Abaadi uu qaadan doono qaraar ku aadan arrintaan haddii aanan lagu xalin mushkilada bixinta lacagaha maalmo gudahood.
Dhanka kalw wasiirka shidaalka India ayaa sheegay in India ay qaadan doonto talaabo kadhan ah Iran islamarkaana aysan ku koobnaan doonin oo keliya shidaalka Iran balse ay milicsan doonto dhanka dowladaha iskaashiga gacanta carabta.
Iran ayaa sheegtay in New Delhi ay ku leedahay lacag dhan 5 bilyan oo dollar oo ah wadarta lacagaha shixnadaha shidaalka Naftada Iran ee ay siisay India bilihii la soo dhaafay.